ဘာမြူဒါ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း
ဘာမြူဒါ LLC လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
A ဘာမြူဒါ LLC သို့မဟုတ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖွဲ့စည်းစဉ်းစားရန်အဘို့အသစ်တစ်ခုဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမြူဒါ (1981 အတွက်ပြင်ဆင်) 2006 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေနှင့်အတူတစ်ဦးလူကြိုက်များကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, တစ်ဦးဥပဒေသစ်သည်၎င်း၏ကမ်းလွန်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများပေးထားပါတယ်။
2016 ခုနှစ်, ဘာမြူဒါအထူးအမေရိကန်အဆိုပါ LLC အက်ဥပဒေထဲမှာဝဲ၏ပြည်နယ်အလားတူဥပဒအောက်တိုဘာလအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ကြွတော်မူပြီးနောက်လုပ်ပါတယ်သော "ဒီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ" ဟုခေါ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများ (LLC) ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းခွင့်ပြုတဲ့ဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌာန်း 1, 2016 ။
တစ်ဦးကဘာမြူဒါ LLC ထူးခြားတဲ့ကော်ပိုရိတ် entity သို့မိတ်ဖက်နဲ့ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်း (ဘာမြူဒါကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီ) ၏မျိုးစပ်သည်။ တစ်ဦးက LLC က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင် (ရှယ်ယာရှင်များ) ကိုကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တခုကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အစားကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာတစ်ဘာမြူဒါ LLC တစျဦးစီရုံ ပူးပေါင်း. မိတ်ဖက်ကဲ့သို့သောမြို့တော်အကောင့်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးဘယ်မှာအဖွဲ့ဝင်များရှိပါတယ်။ အဆိုပါဘာမြူဒါ LLC အက်ဥပဒေလွတ်လပ်ခွင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အသုံးအနှုန်းများနှင့်စီမံခန့်ခွဲတည်ထောင်ခွင့်ပြုအဖြစ်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များအကြားအမြတ်အစွန်းဖြန့်ဖြူး၏အချိန်ကိုက်နှင့်ငွေပမာဏ။
LLC သည်တရားစွဲသောအခါအဖွဲ့ဝင်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ယူမှုမှကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတရားစွဲသောအခါကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့်ပစ္စည်းများကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အကြွေးများကသိမ်းဆည်းရမိခံရခြင်းမှကာကှယျဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့တရားပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်။ ဒါကဘာမြူဒါ LLC တစ်ခုစံပြပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု tool ကိုမှန်ကန်စေသည်။
ဘာမြူဒါမြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းတည်ရှိသည်ဖြစ်သော 150 ကျွန်းများကျော်ပါဝင်သည်။ ၎င်း၏စုစုပေါင်းအရွယ်အစားအများအားဖြင့်အာဖရိကနှင့်ဥရောပနွယ်ဖွား 40 ၏ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေနှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50 စတုရန်းမိုင် (68,000 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးအပေါ်မှီခိုဗြိတိန်နယ်မြေတွေကိုအဖြစ်, ပြည်နယ်၏ဘာမြူဒါရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တစ်ဦးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခန့်အပ်တဲ့သူကအင်္ဂလန်ရဲ့ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်သည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦးအဖြစ်ခန့်အပ်အထက်လွှတ်တော် (ဆီးနိတ်) နှင့်ညီလာခံတစ်ခုရွေးချယ်တင်မြှောက်အိမ်ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်း၏ဥပဒေများကိုဗြိတိသျှအဖြစ်များသည့်ဥပဒေစနစ်အပေါ်အခြေခံထားပါတယ်။
ဘာမြူဒါ LLC အကျိုးကျေးဇူးများ
: တစ်ဦးကဘာမြူဒါ LLC အပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်
အဘယ်သူမျှမအခွန်: ဘာမြူဒါကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ဝင်ငွေအခွန်သို့မဟုတ်မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်မရှိပါ။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူတို့အခွန်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရန်လိုအပ်သည်။
သီးခြားဥပဒေ Entity: တစ်ဦးလက်တွဲမတူဘဲ, LLC သည်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့တူသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တာဝ: LLC သည်မှ (ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တာဝန်များကိုအပါအဝင်) တစ်ဦးချင်းရဲ့တာဝန်, အဖွဲ့ဝင်များ, သို့မဟုတ်အခြား 3rd ပါတီများရန်၎င်း၏မန်နေဂျာတိုးချဲ့, ကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ် LLC သည်သဘောတူညီချက်အားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်အဘယ်သူမျှမပါပြဋ္ဌာန်းချက်များမရိုးသားမှုသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ဦးဘာမြူဒါ LLC ရဲ့ Operating သဘောတူညီချက် (LLC သဘောတူညီချက်) အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုဟာသူတို့ရဲ့ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များမှခွဲဝေနေကြသည်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် ပတ်သက်. ပေးပါသည်။ LLC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားမဆိုနိုင်ငံခြားငွေကြေးတန်ဖိုးနိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့မဲပေးခွင့်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများသို့မဟုတ်အတန်းနှင့်အညီသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။ LLC သည်သဘောတူညီချက်ပါကတူညီသောအခွင့်အရေး, စွမ်းရည်, ပါဝါနှင့်သဘာဝလူတစ်ဦး၏အခွင့်ထူးရှိပါတယ်ကြေညာနိုင်ပါတယ်။
တဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်: တစ်ဦးတည်းသာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
လွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းခြင်း: တစ်ဦးဘာမြူဒါ LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောစာရွက်စာတမ်းကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းခြင်း၏လက်မှတ်ဖြည့်စွက်သည်။
အနိမျ့အခကြေးငွေများ: အဆိုပါဘေလီဇ်အစိုးရသာကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးဘို့ $ 305 အမေရိကန်ဒေါ်လာပညတ်။
စီမံခန့်ခွဲမှု: တစ်ဦးက LLC က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်မန်နေဂျာခန့်အပ်နိုင်ပါ။
ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း: LLC သည်အက်ဥပဒေနိုင်ငံခြား entity နှင့်အတူပေါင်းစည်းဖို့ LLC ရဲ့ခွင့်ပြုကာနိုင်ငံခြား entity အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘာမြူဒါ LLC ဖြစ်စေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပြောင်းလဲမှု: LLC သည်အက်ဥပဒေတစ်ဘာမြူဒါကမ်းလွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်သို့ပြောင်းလဲဖို့ LLC ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တူညီသောအခွင့်အရေးကန့်သတ်မိတ်ဖက်သို့ကူးပြောင်းမှုအတွက်တည်ရှိ။
အနိမ့် Authorized Capital ကိုအဘယ်သူမျှမ: LLC ရဲ့ပုံမှန်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများမဟုတ်ကြကတည်းကအဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်လည်းမရှိ။
အင်္ဂလိပ်: ဘာမြူဒါရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာမြူဒါ LLC အမည်
တစ်ဦးက LLC ဆင်တူသို့မဟုတ်အခြားဘာမြူဒါကုမ္ပဏီကော်ပိုရေးရှင်း, သို့မဟုတ်တရားဝင် entity name ကိုဆင်တူဖြစ်သောကုမ္ပဏီအမည်ရွေးလို့မရပါဘူး။
LLC သည်ဒေသခံတစ်ဦးရုံးလိပ်စာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာနည်းပညာပိုင်းတရားဝင် entity မဟုတ်ပါဘူးကတည်းကသို့သော်, တကမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ဦးက LLC ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာင်များရှိပြီးယင်း၏ LLC သဘောတူညီချက်အရသိရသည်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်အခွင့်ထူးန့်အသတ်ဖြစ်နိုငျသညျ, ကန့်သတ်, သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်ခွဲခြားပေါ် မူတည်. တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဒါကမဲပေး, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အမြတ်အစွန်းနှင့်အခြားအခွင့်ထူးများဖြန့်ဖြူးမှုနှငျ့ဆ။
LLC ရဲ့ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်အရာရှိများ၏တစ်ဘုတ်မရှိကြပါဘူး။ ယင်း၏ LLC သဘောတူညီချက်အဆိုအရအဖွဲ့ဝင်အများစုမဲသောအားဖြင့် LLC စီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်ယင်း၏နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးကို run ဖို့မန်နေဂျာခန့်အပ်နိုင်ပါ။
တစ်ဦး LLC အဘို့အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်ရှိပါသည်။
ဘာမြူဒါဝင်ငွေ, အမြတ်အစွန်း, ဒါမှမဟုတ်ခွဲဝေမအခွန်အခများရှိပါတယ်, မျှမအိမ်ခြံမြေအခွန်သို့မဟုတ်အမွေဥစ္စာကိုအခှနျ, ဒါမှမဟုတ်အရင်းအနှီးအကျိုးအမြတ်အခွန်လည်းမရှိ။ အမြတ်အစွန်းစုဆောင်းနိုင်ပြီးကခွဲဝေပေးဆောင်ဖို့တာဝန်မရှိပါ။
တစ်ဦးက LLC $ 305 အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဝန်ဆောင်ခသောဘာမြူဒါ IBC ကဲ့သို့တူညီသောကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးကြေးပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
အစိုးရနှင့်တင်သွင်းတစ်ခုတည်းသောစာရွက်စာတမ်းကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းခြင်း၏လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လက်မှတ်အဖွဲ့ဝင်များက '' အမည်များကိုမဆံ့မခံပါဘူး။
ဘာမြူဒါဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်လိုအပ်ချက်ရှိသည်ပါဘူးမဟုတ်သလိုတစ်ဦးမဖြစ်မနေစာရင်းစစ်ရှိသေး၏။
သူတို့ရဲ့ထူးခြားမှုကြောင့်အဘယ်သူမျှမကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း LLC ကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကဘာမြူဒါ LLC အပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများ, privacy ကိုသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity, ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု၎င်း၏မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်ပေါင်းစည်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်း၏ထုံးစံကိုစီမံခန့်ခွဲကျော်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်လိုအပ်တစ်ဦးတည်းသာအဖွဲ့ဝင်လွယ်ကူပြီးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှတ်ပုံတင်မရှိနိမ့်ဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင့် မြို့တော်နှင့်အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။